Mmepụta Mmepụta - BXL Creative Packaging
Ngosiputa Ngwa Nri Mmanya Ọla Senti Kandụl na-esi isi
BXL Creative na-emetụta ihe ọhụrụ, ihe owuwu ọhụrụ & teknụzụ ọhụrụ, dị ka mgbochi, 3D UV, 3D embossing, usoro nhazi ngwa ngwa, na inki thermochromic wdg, na nhazi nkwakọ ngwaahịa na mmepụta, na-eme ya otu-nke-a-ụdị .
N'otu oge ahụ, nkwakọ ngwaahịa na gburugburu ebe obibi na-ekerekwa òkè dị ukwuu. BXL na-arụ nnukwu ọrụ iji dozie ngwugwu ngwugwu ngwugwu, arụmọrụ na mkpa obibi ya.
BXL Creative awade nri-ọkwa ihe, FDA-mma & eco ngwugwu ngwọta maka elu-ọgwụgwụ nri ahịa ma anụ ụlọ na mba ọzọ. Mgbe ị na-enweta ọdịdị ngwugwu mara mma, BXL anaghị emebi iwu maka nchekwa nchekwa nri.
Mmanya & mmanya nkwakọ ngwaahịa bụ otu n'ime azụmaahịa bụ isi nke BXL. Karịsịa maka ụlọ ahịa China, BXL Creative bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ngwugwu ama ama ama ama ama ama ama ama ama, na-enye ndị ahịa ihe ngwọta ngwaahịa, na-ekpuchi ịmepụta akara ọhụụ ọhụụ site na nyocha ahịa, echiche, ịkọ aha, ịhazi akara, ahịa azum, boutique imewe, ngwugwu imewe, broshuọ imewe, wdg
Ka ọ dị ugbu a, a na-ebupụ ngwaahịa 80% nke ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na Europe na North America. Na ọgaranya ahụmahụ na mbupụ arụmọrụ na OEM & ODM oru ngo, BXL nwere ike izute niile nkwakọ mkpa maka ndị ahịa.
BXL Creative nwere ọtụtụ azụmaahịa okomoko nke okomoko, nke na mmanụ / isi ya bụ otu n'ime akụkụ ndị bụ isi. Ndị ahịa kachasị na Europe, North America, Mid-East, Australia, wdg.
BXL Creative nwere ọtụtụ afọ nke ọhụụ na mmepụta nke kandụl na-esi ísì ụtọ mba ụwa, kemgbe azụmahịa mba ụwa malitere. Ruo ugbu a, ndị ahịa na-ekpuchi ọtụtụ ụdị ụlọ ọrụ ama ama.
Petite Oyi kpọnwụrụ snowflake
Ọ nwere ike nweta ihe cracking snowflake imecha. Mgbe ejikọtara ya na eserese eserese, ọ nwere ike ịmepụta ihe ịchọ mma pụrụ iche.
Ọ bụ ihe ziri ezi & ziri ezi karịa mgbe nile na-ekpo ọkụ stampụ. Emepụtara deco a kpọmkwem maka obere pere mpe, akara ahịrị, ntụpọ, leta & usoro, nke enweghị ike ịme stampụ ọkụ. Ọ nwere ike nweta ihe ọkaibe foil stampụ imecha na ukwuu oru oma na ezi n'ọnọdu. Ọ na-egosipụta ịdị mma nke ụkpụrụ ahụ, ọmarịcha, ịdị mma, ọtụtụ ọkwa na mmasị.
A na-enweta usoro a site na ijikọta ihuenyo silk na stampụ dị ọkụ. Ọ na - ewepụta ihe eji achọ mma na ejiri ọla rụọ ọrụ nke ọma, nke na - enye patten ya na mpempe akwụkwọ enyemaka, na - eweta mmetụta dị ike na 3D ọdịdị dị mma.
Mgbe ntụpọ UV zutere na mmetụta 3D, ọ na-anapụta mmetụ dị ukwuu na mmetụta anya.
Na-emepụta mmetụta translucent, na-enweta mmetụta dị ike nke na-ahụ anya.
Site na nrụgide-okpomọkụ, a na-agbanwe usoro na ahịrị n'elu akwụkwọ ahụ, na-agbanwe agba akwụkwọ ka ọ bụrụ mpempe ọkụ na ndò site na agba akwụkwọ na-acha akwụkwọ, nke na-eme ka udiri ahụ na aka aka nke ngwugwu ahụ sie ike.
Extra-miri 3D Embossing
Maka usoro na eserese na-achọ iji nweta akwa 3D miri emi emboss site na oyi akwa ma mepụta mmetụta dị ike, BXL Creative nwere ike ime ka ọ bụrụ maka gị.
Embossing Foil Akwụkwọ Label iji dochie metal labeelu
Patternskpụrụ eriri eriri nwere concave na convex layering na aka mmetụta bụ nke sitere na ihe mpempe akwụkwọ nke akwụkwọ mpempe akwụkwọ site na ụdị mpempe akwụkwọ pụrụ iche iji mepụta mmetụta nke ọgaranya mara mma, nri ụtọ na ọdịnaya dị ukwuu, yabụ mmetụta siri ike nke metal na mmetụta anya.
Ahaziri Nlereanya udidi
A na-enweta usoro a site na ịmalite. Enwere ike ịhọrọ ahịrị dị iche iche maka ijikọ. Site n'usoro anụ ahụ, a na-ejikwa foto a mee ka esemokwu ahụ dị n'akụkụ atọ na usoro doro anya doro anya, na -emepụta ọmarịcha, esemokwu dị mma na aka dị mma na-eche usoro ntụgharị ya dị mma ma nwee mmetụta dị ike.